Zvikonzero gumi zvekuda kutsvaga Kwekutungamira Chizvarwa | Martech Zone
Kana iwe uchibatanidzwa mune chero B2B sangano, iwe unokasira kudzidza icho chinotungamira chizvarwa chikamu chakakosha chekuita bhizinesi. Saizvozvo:
62% yevashandi veB2B vakati kuwedzera kwavo kutungamira vhoriyamu ndiko kukoshesa kwekutanga.
Kudiwa Gen Chirevo
Nekudaro, hazvisi nyore nguva dzose kugadzira zvakakwana zvinotungamira kuvimbisa kudzoka nekukurumidza kune investment (ROI) - kana chero pundutso, pachinhu icho.
Kurume 68% emabhizinesi anonzi arikutambura nezera rekutungamira, uye rimwe 61% yeB2B kushambadzira vanhu vanofunga kutungamira chizvarwa ndiyo yavo yepamusoro chinetso.
Ndipo panotangira chizvarwa chinotungamira chinotungamira, nzira yekumberi-kufunga kune bhizinesi inounza chiratidzo chako kunze uko, inoderedza mitengo yako, uye inowana chete inokodzera kutungamira. Kune zvikonzero zvakawanda nei iwe ungave uri kutarisa kune yekunze inotungamira chizvarwa, kunyangwe iwe uri kuyedza kuwedzera mumisika mitsva kana kuwana yakawedzera rutsigiro kune rako rekutengesa timu.
Uye tinozviwana. Isu takavaka bhizinesi redu pachedu pazera rinotungamira (tiri kunwa yedu champagne, kana uchida!). Heano gumi ezvikonzero zvatinoda nei tichida kubuda paCIENCE muna 10 uye kuti kambani yako ingabatsirika sei nekuwedzera zvishoma - kana zvakawanda - zvekushambadzira muchirongwa chako chekutungamira chizvarwa.
Chikonzero 1: Kubuda Kunowana Iyo Yakanyanya Kunanga ROI
Nekuda kwekunetseka uye kusava nechokwadi kwekuita bhizinesi nhasi, makambani mazhinji eB2B anosarudza yakabuda inotungamira chizvarwa kuti iwane yakanyanya kutungamira ROI. Panzvimbo pekumirira inbound mhedzisiro inogona kutora 6 kune mwedzi 12 (kana kureba!) pasi pemutsara, iwe unogona kuwana inokurumidza kudzoka kubva outsourced lead chizvarwa masevhisi pamutengo wakaderera zvikuru.
Funga nezvazvo-kazhinji kune yakakwira mwero wehuwandu hwekutengesa kwemukati (iyo yekuzvidira mwero iri 16%; kusazvipira kunowanzove kwakakwirira) tisingataure nezve mari yega yekuhaya yakasimba yemukati inotungamira chizvarwa timu (zvechokwadi nyanzvi mumunda mavo) kuve nechokwadi chechokwadi-moto ROI. Kana iwe ukamira kuti utarise mutengo wekuita rako wega rinotungamira danho rezvizvarwa, iyo ROI ye SDR kutsvagisa kunze inova mhinduro inonzwisisika zvakanyanya.
Outsourced lead chizvarwa chakanakisa pahyper-kunongedza iyo inotungamira iwe yaunoda kuita bhizinesi nayo. Tichifunga nezvekuti iwe unogona kufanotemerwa kushandisa pano, wobva wakanangana nekuburitsa (kazhinji muchimiro chemisangano inoitwa), kune crystal yakajeka math kuti uone kudzoka pane kudyara. Iyo ingave iri yakachena fomula yechero ipi yekuenda-kumusika chiteshi iwe yaunogona kukumbundira.
Chikonzero 2: Inowedzera Yako Brand Kuratidzira
Wanga uchiziva here kuti vatengi vazhinji-80 muzana yevatengi (maererano 2018 Google SERP kudzidza) -Uchazotora mhando inozivikanwa paunenge uchitsvaga zvigadzirwa online, zvisinei kana zvikauya pakutanga mune yekutsvaga injini mhedzisiro?
Maitiro haachinje muB2B kutenga mamiriro. Kunyangwe vanhu vari kunyanya kuziva mazuva ano mukutsvaga kwavo kwechigadzirwa uye ruzivo, ruzivo rwechiratidzo ruchiri chinhu chakakosha icho chinokupa iwe kukwikwidza kumucheto uye kunovaka kuvimbika mune rako brand.
Outbound lead chizvarwa masevhisi anogona kukupa iwe yekutengesa nyanzvi nyanzvi dzinogona kuisa iyo chaiyo inobuda mameseji kwaunoda iwe-kubva kushambadzira uye kufona kufona neemail kushambadzira uye pamhepo kutaurirana - kuti yako maricho icherechedzwe uye ako tarisiro taridziro. Iwe uri kunyatso kuwana akawanda "at-bats" kuti uwedzere rako rekuratidzira-rakakura-slam mhinduro iyo inogona kuvaka kuvimba mune yako brand uye pakupedzisira kukuwanisa iwe zvirinani mhedzisiro.
Chikonzero 3: Inotsigira Multi-Channel Kushambadzira Campaigns
Zvinoenderana neCIENCE's VP yeZvekutengesa, Michael Maynes, yakanakisa nzira yekusvikira iri yakawanda-chiteshi imwe. Asi uine akawanda mageji kunze uko, unoita sei iwe wakabudirira kubuda kwemazhinji-chiteshi mushandirapamwe kuti uwane zvinangwa zvako zvaunoda? Mabhizinesi anogara achitsvaga iyo tikiti yendarama inoshanda. Asi ko kana iwe uchida kushandisa akawanda matikiti egoridhe kuti asvike kune ako anotarisirwa vateereri uye kupfuura?
Kugadziriswa kwehunyanzvi kwemushandirapamwe wemigwagwa yakawanda inogona kunetsa-nguva-yakasimba uye zviwanikwa-zvinorema, unoda nzira dzakanyatsorongwa uye kuridzwa kuti ubudirire kuwana izvo tarisiro. Ndipo panouya zano rekunze rekutungamira - kukuitira kusimudzira iwe.
Chizvarwa chakasimba chakatungamira chinogona kukubatsira iwe kushandisa yakanangwa zvakanyanya nzira dzinobuda uye gadzira dhata kubva kwakawanda masosi, wobva wabaya mumatanho matsva kuti utevere iwo anotungamira mafambiro. Unoda kumira kumirira inbound kuti uone mhedzisiro? Chengetedza mari mumushandirapamwe wekushambadzira unoisa simba mune zvese izvi.
Chikonzero 4: Inowedzera Shanduko Inopinda
Wanga uchiziva here kuti kubuda kunoitisa basa rakakosha mukuvhara zvibvumirano zvinopinda? Muchokwadi, maererano ne 2019 CIENCE kudzidza, yakakosha 17% yezvibvumirano-zvakavharwa zvibvumirano zvaive zvakabatsirwa kunze. Tinodaidza izvi kuti rubatsiro rwunobuda, kana huwandu hwekutungamira (kana nzira dzinotendeuka dzakatenderedzwa) idzo dzakatanga kutariswa nechiteshi chakabuda, sekufona kana email meseji, izvo zvinoguma nezvibvumirano zvakavharika.
Hazvishamise kuti kubuda kwave kuita chinhu chikuru chinopa mukana wekupinda mukati nekuda kwezvikonzero izvi:
Inoparadzira izwi kune vatengi nezve zvigadzirwa zvako uye masevhisi
Inowedzera ruzivo nezve mhinduro dzinopihwa nebhizinesi rako
Inopa yako brand kana kambani kuwedzera kuratidzwa
Inokwezva vamwe vashanyi kune webhusaiti yako
Hazvina kujairika kuti tarisiro mune akateedzana kuti udzokere kuchitema chako kana ivo vari mumusika wemhinduro senge yako (funga nezve izvi zvakafanana nekutangazve).
Senzira yakatwasuka yekusvika kune yako tarisiro tarisiro, nzira dzinobuda dzinowedzera mikana yekushandurwa uye rutsigiro rwunowanikwa mukati
Chikonzero 5: Chaizvoizvo Inonongedzera Yako ICP uye Mutengi Munhu
B2B makambani anofanirwa kutora yakawanda yakanaka nguva pakutanga kwekutengesa kutenderera uye mushambadziro wekushambadzira kuvandudza yakasimba yakasimba yevatengi nhoroondo (ICP) uye kunongedza mushandisi persona. Asi ko kana iwe uine zviwanikwa zvishoma kana kushaya hunyanzvi hwekugadzira nhungamiro yekugadzirisa yako yekutungamira chizvarwa maitiro?
Nekutsvagisa chizvarwa chinotungamira, unogona kukurumidza kuita kwekutsvagisa nevanyanzvi vakadzidziswa vanoshandisa ungwaru hwekutengesa kunyatso sarudza yako ICP nemutengi manas. Bhizinesi rako rinogona kugadzira dhizaini yakasimba yekutengesa inoenderana nemaitiro aya
Yakanakira Vatengi Mbiri (kana ICP- Iyi irondedzero yakakwana yekambani inogona kuve yako inotevera mutengi. Iwe unofanirwa kugadzira yakatarwa ICP kune yega yega inobuda kushambadzira mushandirapamwe kuti ushandise segwara rekutsvaga yemhando yepamusoro inotungamira.
Mutengi Persona (kana BP) - Izvi zvinokutendera kuti unzwisise vangangoita vatengi uye kutaurirana neavo vanotungamira pane ese nhanho mune yako yekutengesa fanera. Izvi zvinosanganisira ruzivo nezve zvakapfuura, zviripo, uye vanogona kuve vatengi 'maitiro epfungwa, maitiro ekutenga, uye maitiro maitiro.
Vanobuditsa vatungamiriri vezvizvarwa zvinotungamira vane nzwisiso yakadzama yekuti vatengi vako ndivanaani uye kuti havasi vanaani - iwe unozowana nyanzvi dzekutsvaga dzinogona kuvaka dhata chairo kukambani yako kuti isimbise zvinotungamira uye kuzadzisa zano rako rinobuda.
Chikonzero 6: Inozivisa Sarudzo-Vagadziri
Muchirongwa chinotungamira chechizvarwa, kusvika kune vanoita sarudzo ndicho chinhu chakanyanya kukoshesa. Chizvarwa chevatungamiriri vakanaka ndezvekutsvaga nekutaura kune vanhu chaivo, asi iwe unoziva sei kunyatso tarisa kwavari kana kutoziva kwekuwana? Iine avhareji huwandu hwevanhu pane a boka rekutenga ku6.8, ndeupi mukana wekuti iwe ugone kutsanangura iye ndiani anotarisira:
Kutyaira zvirongwa zvekutenga zvichitungamira musangano ravo
Kuvhara madhiri ebhizinesi
SDR inoburitswa neruzivo inogona kuisa mepu mumasangano uye kuona vanoita zvisarudzo, nehunyanzvi hwekuongorora kupatsanura mafambiro akanaka kubva pane akaipa. Nekushandisa SDRs kutanga kutaurirana netarisiro inokodzera, nguva dzekugadzwa dzinogona kumisikidzwa nevanoita sarudzo-vanokwanisa, kubvisa nguva inopambadzwa inogona kukanganisa kugadzirwa kwechikwata chako.
Chikonzero 7: Inopinda Mitsva Misika
Nekushambadzira kwakawanda, marongero ako echizvarwa anotungamira anowanzo tenderera ekutora chairo chakanangwa nevateereri kuti vaone zvemukati-izvo zvinowanzo chengeta iwe wakasungwa kune niche. Asi nekubuda, unogona kukwezva misika mitsva uye kutoyedza zvitsva mukati mekutengesa kutenderera.
Chirongwa chekushambadzira chinotungamira chinoburitsa chinogona kutora chinzvimbo chine simba kuti chisangosvika kune vateereri vako chete asi usvike misika mitsva zvakare. Nemauto evakawanda vane tarenda vanobuda nyanzvi kuti vatungamire mutero, iwe unozokwanisa kuwedzera zvaunotungamira kune nyowani huwandu hwevanhu nenzvimbo dzenzvimbo.
Kubuda kuri zvakare kwakanaka kuyedza kunze misika mitsva kwaunogona kuwana mhinduro nekukurumidza kubva kumusika uye gadziridza zvinoenderana. Ma SDR ako anogona kupa ruzivo rwakakosha mune izvo (uye zvisiri) zvinoshanda mushandirapamwe zano rako.
Chikonzero 8: Inoenda Kumusika nekukurumidza
Inbound, zviitiko, kudyidzana neruzhinji, chiteshi mudiwa, chigadzirwa chakatungamira kukura (PLG), kana networking-based-kuenda-kumusika zvinongedzo zvese zvinotora nguva. Nepo iwo marongero anogona kuve akasimba zvikamu zveako zvese bhizinesi zvinangwa, zvinotora nguva yakareba kukura. Chizvarwa chekubuda chinotungamira, kune rimwe divi, chakanakira kunongedza zvinotungamira zvemhando yepamusoro izvo zvinogona kunge zvakagadzirira kutenga chigadzirwa chako kana sevhisi, iyo inobvumidza iwe kuenda kumusika nekukurumidza.
Uyezve, kugona kugadzira kutanga-kufambisa mukana mundangariro dzevasarudzo vanokonzeresa kumaakaunzi akanangwa ndiyo kiyi yekutonga kwekutonga uye hutungamiriri hwechokwadi hwepamusika. Kugadzirisa zvese ajenda uye mabhenji ekuti vatengi vako vakanaka sei fanira kuva uchifunga nezve chigadzirwa kana sevhisi senge yako ndeye makambani akangwara anozvisiyanisa.
Kuwedzera saizi yako yekushambadzira fanera neakawanda anobuda anotungamirwa anotungamira anowedzera mimwe mikana mune yako yekutengesa pombi, iyo ino dudzira kune mamwe akavharwa madhiri uye nekukurumidza iyo yekutengesa kutenderera. Nekutsvagisa chizvarwa chinotungamira, iwe unogona kutarisa kune inokurumidza kuenda-kumusika nzira iyo inowedzera kutengesa uye inogona kuwedzera mari.
Chikonzero 9: Inoisa Yako Yekutengesa Chikwata Kumusoro Kuti Ubudirire
Kubudirira kwechikwata chako kunovimba zvakanyanya pombi yekutengesa ine hutano. Nekutsvagisa timu yematarenda eADRs kuti uwane iwo anokodzera kutungamira, unogona kunyatso kupa simba rako mukati-imba rekutengesa timu kuti itarise pamabasa epamoyo nekuwedzera kushanda pamwe nekubudirira. Nekurera ako anotungamira, iwe unogona kuwedzera mikana yekutengesa neinenge 20%, sekureva Kudiwa Gen Chirevo.
Izvi pakupedzisira zvichasimbisa kudyidzana uye kuvimba pakati pekutengesa nekushambadzira. Izvo zvakare zvinoita kuti iwe ugone kuvaka yakasarudzika yekutengesa sangano - ino nyatso kuenderana pamwe nani kutendeuka mwero - uko kune vatengesi vatengesi vakatarisa zvakanyanya pakuvhara pane kutsvaga. Paavhareji, kutengesa reps kushandisa zvikamu makumi matatu nezvisere kubva muzana yenguva yavo vachitengesa kune vatengi (maawa gumi nemaviri pavhiki).
Kunyange zvikwata zvekutungamira zvakabuditswa zvichitarisa kusimudzira kwekutungamira, kuseta nguva, uye kutonhora, timu yekutengesa iri mumba inogona kupedza nguva yakawanda ichichinjisa aya emhando yepamusoro anotungamira uye ekuvhara madhiri- nzira yekukunda-kukunda mapato ese.
Chikonzero 10: Anorega Iwe Udane Iwo Mapfuti
Uine inbound, unowana zvaunowana, asi nekubuda, unowana waunoda.
Trish Bertuzzi, Iyo Boka reBridge
My mantra. Makambani ari kutanga kuona kuti yakabuda lead lead inzira yakatendeka uye isingadhuri yekuwana kudzoka kuri nani pane yako investa nekuvandudza yekutengesa kutenderera. Asi une masimba mangani paunoburitsa chizvarwa chinotungamira?
Kufanana nemamwe masevhisi aunogona kuburitsa kunze, senge dhizaini webhusaiti, zvemagariro media, kana kubhadhara-nekudzvanya (PPC) kushambadzira, apa ndipo panotsvagirwa tsvagiridzo yako yekuwana mhando yekutungamira chizvarwa sevhisi. Kuwana chaicho chakabuda chinotungamira chizvarwa sevhisi zvinoreva kuti iwe uchave uine yakawanda kutonga sezvawaizoita dai ma SDR anga akagara muhofisi yako uye vachikushandira zvakananga iwe.
Nekambani inotungamira inotungamira, iwe unogona kutarisa ese ako B2B mishandirapamwe uye uve nechokwadi chekuti pane zvishoma nezvishoma kuvandudzwa kwehunhu hwekutungamira kwako. Mhedzisiro yako inoratidzwa mumishumo yakadzama yakatarisana nemametric iwe aunogona kuongorora - unenge uine masimba akakwana ekunyatsoona mamishinari ako kuti anomhanya sei uye kana timu yako yekusvikira yabudirira (kana kukundikana), uye nekugadzirisa nekukurumidza kuti zvienderane neyako bhizinesi.
Wana Bhenefiti yekutsvaga Outsour Lead Generation
Nepo mamwe maratidziro ekushambadzira angashande zvirinani mumba, mamwe mabasa anogona kukukonzera kurwadziwa nemusoro-uye mari-pane zvakanaka, sekugadzira zvinotungamira, zviri nani kusiirwa kune nyanzvi dzeSDR dzinogona kuzviita zvinobudirira.
Haasisiri mutorwa kune vashambadziri, kuburitsa inotungamira chizvarwa chave chinhu chakakosha chebhizinesi rine kukosha kwakaratidzwa uye kudzoka kune hutano. Sechikamu chemubatanidzwa wekushambadzira nzira, iwe unozogona kushandisa yakabuda inotungamira nzira yechizvarwa nzira kuti uone uye kukura kambani yako kune izere kugona kwayo.
Bhuka Musangano neCIENCE
Tags: b2bb2b kushambadzira kunobudabpmutengi munhuciencemutongi-sarudzoicpchimiro chakanakira vatengitungamira genmutungamiri wechizvarwachizvarwa chinotungamira chinotungamirakushambadzira kunzeoutsourced lead genoutsourced lead chizvarwaoutsourcingkutengesa kusetwa mamirirosdrsdr kutsikisa
Eric ndiye mutungamiriri wekutanga ane fungidziro yemabhizimusi. Hunyanzvi muBrand Building, Izwi reMutengi (Advocacy Kushambadzira), Yekushambadzira Strategic, Kutengesa, Bhizinesi Rinovandudza, Lead Generation, Yemagariro Media, Zvemukati Kushambadzira (incl. SEO), Bhizinesi Kuronga kweCloud, SaaS uye B2B software. SaCMO weCIENCE, Eric anotarisisa kushambadzira kwekambani kutenderera nzira dzinobuda uye dzinobuda dzinosanganisira Rwendo rweNew Buyer.